Microsoft yakaburitsa iyo Linux kernel sosi kodhi inoshandiswa muWSL2 | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft yakaburitsa shanduko dzese uye zvinowedzerwa kuLinux kernel inoshandiswa mu iyo tsanga yakatumirwa kune iyo subsystem WSL 2 (Windows Subsystem yeLinux v2). WSL Yechipiri Edition inozvipatsanura pachayo nekuendesa izere-yakazara Linux kernel, pane iyo pane-iyo-inobhururuka emulator iyo inoshandura Linux system inoshevedza muWindows system mafoni.
WSL 2 inguva itsva yezvivakwa iyo inobvumidza iyo Windows subsystem yeLinux kumhanyisa iyo Linux ELF64 mabhinari paWindows. Iyi vhezheni nyowani yeWSL 2 inoshandisa Hyper-V maficha kugadzira isingaremi muchina chaiwo uine shoma Linux kernel.
WSL 2 chikamu che Windows 10 yekuvandudza vhezheni 20H1, iyo ichaburitswa muna Kubvumbi 2020.
Iyo GitHub repository yeWSL2 sosi kodhi
Disponibility kubva kunobva kodhi inobvumira vanofarira kuvaka yavo Linux kernel inovakira WSL2, kana vachida, vachifunga nuances dzepuratifomu iyi. Iyo Linux kernel inosanganisirwa muWSL2 inoenderana neshanduro 4.19, kumhanya munzvimbo yeWindows uchishandisa muchina chaiwo watove kushandiswa muAzure.
Kugadziridzwa kweLinux kernel kunoendeswa kuburikidza neWindows yekumisikidza michina uye kunoedzwa paMicrosoft inoramba ichiwedzera zvivakwa.
Zvigadzirwa zvakagadzirirwa zvinosanganisira optimizations yekudzora kernel yekutanga nguva, deredza ndangariro yekushandisa uye siya iyo shoma inodiwa seti yevatyairi uye masisitimu epasi mune kernel.
Microsoft inotsanangura munzvimbo yayo kuti "iyo Linux kernel inongowanikwa chete pasi pemitemo yeGeneral Public License yeGNU vhezheni 2 (GPL-2.0), sezvakataurwa mu GPL-2.0 Marezinesi, kunze kwe syscall.
Iyo rezinesi inotsanangurwa mu COPYING faira inoshanda kune iyo kernel sosi kodhi yakazara, kunyangwe yega faira sosi inogona kunge iine rezinesi rakasiyana rinofanirwa kunge riri GPL-2.0 inoenderana.
GPL-1.0 +: GNU General Ruzhinji Rezinesi v1.0 kana gare gare
GPL-2.0 +: GNU General Ruzhinji Rezinesi v2.0 kana gare gare
LGPL-2.0: GNU Raibhurari v2 General Veruzhinji Rezinesi chete
LGPL-2.0 +: GNU Raibhurari General Veruzhinji Rezinesi v2 kana gare gare
LGPL-2.1: GNU Yakatemerwa Veruzhinji Yakatemerwa License v2.1 chete
LGPL-2.1 +: GNU Yakatemerwa Ruzhinji Rezinesi v2.1 kana gare gare
Uyewo, mafaira ega ega anogona kupihwa pasi peiri rezinesi, semuenzaniso imwe yemhando dzakasiyana inowirirana neGLP uye pasi perezinesi rezinesi seBSD, MIT, nezvimwe.
Mushandisi-space API (UAPI) mahedhiyo maficha, ayo anotsanangura chimiro cheanoshandisa-nzvimbo zvirongwa neiyo kernel, inyaya yakakosha. Zvinoenderana netsamba iri mu kernel COPYING faira, iyo syscall interface muganho wakajeka, iyo inowedzera zvinodikanwa zveGPL kune chero software inoshandisa iyo kutaura neiyo kernel.
Nekuti misoro yeUAPI inofanirwa kuverengerwa mune chero sosi faira inogadzira inobatika inomhanya paLinux kernel, iyo yekusarudzika inofanirwa kunyorwa neakasarudzika rezinesi kutaura.
Iyo yakajairwa nzira yekuratidza rezinesi reiyo sosi faira ndeyokuwedzera inoenderana inodzokorora zvinyorwa mune yekutaura pamusoro pefaira. Nekuda kwekumisikidza, typographical kukanganisa, nezvimwe, aya "mapassword" anonetsa kutsigira maturusi anoshandiswa mune yekuteerera rezinesi.
Mukuwedzera, Microsoft yakumbira runyorwa rwepachena runyorwa rwema distros ayo anoburitsa ruzivo nezve hutsva hutsva padanho rekutanga rekutsvaga, zvichibvumira kupihwa kwekugadzirira kugadzirisa matambudziko pamberi pekuzivisa kwevanhu.
Microsoft inoda kuwaniswa kune runyorwa rwekutumira ruzivo rwekukuvara kutsva kunokanganisa maseti ekuparadzira akadai seAzure Sphere, Windows Subsystem yeLinux v2, uye Azure HDInsight, izvo zvisina kubva pane zvinoitwa zvekugovera zviripo.
Greg Kroah-Hartman, ane basa rekuchengetedza bazi rakatsiga, akagadzirira kuita, kunyangwe hazvo isina kuita sarudzo yekupa mukana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Microsoft yakaburitsa iyo Linux kernel sosi kodhi inoshandiswa muWSL2
unorega microsoft iise ruoko kune linux kernel ... zvazvichaita sezvayakaita muzuva rayo nemamwe masisitimu uye windows uye dos ... kunova kugadzira OWN linux extensions uye pavanosungirwa kuishandisa iri kuita zvakawanda uye zvimwe kusvikira yatora kutonga kuzere kweLinux kernel ... ini ndakatozviita mune zvimwe zvinhu ... uye ikozvino zvave kuwana zvishoma zvishoma ne linux kerner ... ndeyekuti HAUDZIDZE microsoft modus operandi ... ndezvekuti iwe haudzidze ... kana iwe unofunga kuti chimwe chinhu chachinja mukambani iyi?
Kunyange zvakadaro, iwe hauna njere